महेशबहादुर सिंहलाई ३७ बबर्ष कैद सजाय
काठमाडौं, चैत्र १८ - चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्दै हिड्ने महेशबहादुर सिंहलाई काठमाडौं प्रहरीले बिभिन्न ५ वटा अपराधमा ३७ बर्ष ७ महिना कैद सजायको माग गरेको छ । ३ ब्यक्तिको अपहरण हातहतियार खरखजना,, बन्यजन्तु आरक्षण, जबरजस्ती चोरी र डाँका मुद्धामा यस्तो माग दाबी गरेको हो । सिंहको घरबाट बरामद ५ वटा हतियार अवैध भएको पुष्टि भएको छ । प्रहरीले २ साताअघि सिंहको घरबाट ६ वटा हतियार बरामद गरेको थियो । तीमध्ये ५ वटा अवैध भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हातहतियार तथा खरखजाना नियमावली ०२८ को दफा ४ उपदफा (२) अन्तर्गत एउटा हतियार खरिद गरेको ५ वर्षपछि मात्र अर्को लिन पाइन्छ । तर, उनले ८ वर्षभित्रै थप ५ हतियारको अनुमति प्राप्त गरेका थिए । समय नपुग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ५ वटा हतियार दिनु र सिंहले राख्नु गैरकानुनी देखिएको हो । ०४९ चैत १५ मा पत्नी जयश्री सिंहका नाममा ललितपुर जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएको हतियारमात्र वैध रहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । 'बजारमा पाइने खेलौना जसरी फटाफट हतियारको इजाजत दिइएको छ,' काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश खरेलले भने, '…
बिमानस्थल काण्डमा गृहमन्त्री जङगिएपछि
बिमानस्थल लापरबाहीमा प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि
घटना ढाकछोपको प्रयास, गृहमन्त्री रुष्ट
काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको लापरबाहीमा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग (राअबि)का कर्मचारी समेत तानिएका छन् । गृहमन्त्रालयले गरेको छानबीनमा प्रहरी र राअबीका कर्मचारीको समेत लापरबाही देखिएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायका बिमानस्थल प्रमुख र घटनाका बेला ड्युटीमा खटिएका कर्मचारीलाई तानेको हो ।
उनीहरुले घटना घटेपछि माथिल्लो निकायलाई जानकारी नगराई लुकाउन खोजेको र सुरक्षाप्रति संवेदनशिल नभएको आरोप छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिमानस्थल प्रहरी प्रमुख नायब महानिरीक्षक (डिआईजीपी) गोपाल भण्डारी सहित ४ सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी मुख्यालयमा काजमा तानेको छ । त्यसमा डिआईजीपी भण्डारी, त्यसदिनका फिल्ड अधिकृत डिएसपी कृष्ण कुवँर र अध्यागमन डेस्कको ढोका र लिफ्टमा बस्ने दुई प्रहरी छन् ।
अवैध ब्याजबाट अकुत कमाइ
काठमाडौ, फाल्गुन २६ - केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षअघि सूचना पायो, महेशबहादुर सिंह दरबारमार्गका रेस्टुरेन्टमा पाइन्टको दुवै खल्तीबाट दुइटा पेस्तोल निकाली टेबुलमा राख्छन्, अनि रवाफ देखाउन थाल्छन् । तत्काल उनको पिछा गर्न एउटा टोली खटाइयो । टोलीले उनको गाडी थापाथलीमा रोकी तलासी लियो, हतियार फेला परेन । 'पिछा गरेको थाहा पाएर उनी हतियार बोक्न छाडेछन्,' सीआईबी स्रोतले भन्यो । त्यो घटनाबाट सिंह ढिम्केनन् । उनीबारे प्रहरीमा चर्चा हुन्थ्यो, निगरानीचाहिँ निरन्तर भएन । पाँच वर्षअघि लक्ष्मी बैंकका सीईओ सुमन जोशीलाई लक्ष्य गरी दरबारमार्गमा गोली प्रहार भयो । 'अरू नै भन्ठानेर हानेको जोशी पो रहेछ भन्दै हिँड्ने सिंहलाई छुने हिम्मत प्रहरीले देखाएन,' एक घरजग्गा व्यवसायीले भने । तिनै सिंह शुक्रबार समातिएका छन ।
मिसनमा को पहिला ?
काठमाडौं, चैत्र १५ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रहरी मिसन 'अनपोल'मा खटिन प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीबिच प्राथमिकतामा को पर्ने भन्न अन्यौलता छाएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधि टोलीले पछिल्लो पटक लिएको 'स्याट' परिक्षामा उत्तीर्ण भएका परिक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंक टोलीले सार्वजानिक नगरेपछि यस्तो अन्यौलता देखिएको हो । यसले दुई प्रहरी संगठनमध्ये कुन संगठनका र त्यहाँ पनि कसलाई पठाउने भन्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ । युएनको टोलीले उत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण मात्र भनेका कारण यस्तो स्थिती आएको हो । यसअघि परिक्षार्थीले प्राप्त गरेको अङक समेत दिने गरिएको थियो । यसपालि नेपाल प्रहरीका २ सय ३० र सशस्त्र प्रहरीका १ सय ४७ जना प्रहरीले अनपोल मिसन परिक्षा उत्तिर्ण गरेका छन् । यिनीहरु दुई बर्ष भित्रमा मिसनमा गईसक्नुपर्छ । दुई बर्ष भित्र युएनले भ्याकेन्सी नखोले वा उत्तिर्ण हुने भन्दा कम संख्यालाई खोले जान नपाउनेले पुन परिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । अनपोल मिसनमा फौजमा जागिर खानेका लागि आर्थिक हिसाबले राम्रो कमाई हुने मौका मानिन्छ । एकपटक जानेले एक बर्ष भि…
बिमानस्थलमा लापरबाही अस्विकार्य
काठमाडौं, चैत्र १४ - विदेशबाट हवाइजहाज आउने बेलामा संवेदनशिल स्थल छाडेर अन्यत्र जानु गलत भएको गृहमन्त्रालयको छानबीन समितीले ठहर गरेको छ । गृहका सहसचिब यादव कोइरालाको संयोजनमा गठन भएको समितीले अध्यागमनका कर्मचारीले नियतबस उक्तस्थल नछाडेको भएपनि सुरक्षाको हिसाबाले गम्भीर त्रुटि भएको औल्याएको छ । 'त्यस्तो संवेदशिल स्थानमा बसेका कर्मचारी जहाज आउने बेलामा त्यसरी डेस्कमा नहुनु गंभिर लापरबाही हो' छानबीन समितीमा रहेका एक सदस्यले भने 'उनीलाई त्यसको संवेदनशिलताका बिषयमा ज्ञान नभएको हुनसक्छ ।' गत शनिबार साँझ विदेशबाट प्लेन आउने बेलामा आगमन १४ वटा डेस्क ८ मिनेट खाली भएको थियो । त्यो बेला भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको स्पाईस जेटका ५० भन्दा बढि यात्रुले आगमन फारम भरेर डेस्कमा छाड्दै हिडेका थिए । अनुसन्धान समितीले बिमानस्थलमा रहेका कर्मचारी र सिसिटिभी फुटेज हेरेको थियो । सिसिटिभीमा ८ मिनेट मात्र डेस्क खाली भएको पाइएको थियो । डेस्कमा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीहरु बस्ने गर्छन् ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक लामा रहेनन्
काठमाडौ, चैत्र १२ -
पूर्व सहायक मन्त्री एवं नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक दिलबहादुर -डीबी) लामाको मंगलबार राति निधन भएको छ ।
नुवाकोटस्थित पुख्र्यौली घरमा रहेका ८४ वषर्ीय उनलाई मंगलबार राति श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं ल्याउने क्रममा उनको निधन भएको हो । उनी निमाणर्ाधीन मन्दिरको काम हेर्न केही दिनअघि त्यसतर्फ गएका थिए । उनको शव बसुन्धरास्थित घरमा राखिएको छ ।
अन्त्येष्टिका लागि लामाहरूले बिहीबारको साइत दिएको उनका ज्वाइँ पूर्व अत्तिरिक्त महानिरीक्षक रूपसागर मोक्तानले जानकारी दिए । लामा २००७ सालमा सदर नेपाल आम्र्ड कन्सटेबुलरीको सुवेदार पदबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०३९ असार १ गते प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । ४ वर्ष महानिरीक्षक बनेका उनले प्रहरी अस्पताल र वीरेन्द्र प्रहरी विद्यालय खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । प्रहरीमा महिला भर्ना उनैले सुरु गरेका थिए ।
सामुदायिक प्रहरीको अभ्यास पनि उनैले थालेका थिए । ३६ वर्ष प्रहरीमा बिताएका लामा विवादमुक्त भने रहन सकेनन्् । अवकाशपछि सरकारले उनलाई पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०४४ मा पक्रियो । ५ वर्ष …
जनकपुर विस्फोटमा 'सभासद साह संलग्न'
काठमाडौ/जनकपुर, चैत्र ४ - झन्डै दुई वर्षअघि जनकपुरको रामानन्द चोकमा गराइएको बम विस्फोटको मुख्य योजनाकार सद्‌भावना पार्टीका तर्फबाट धनुषा क्षेत्र नम्बर-४ का सभासद सञ्जयकुमार साह 'टक्ला' रहेको खुलासा भएको छ । अनुसन्धान क्रममा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिको बयान र अन्य आधारबाट साहको संलग्नता पुष्टि भएको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो । बम विस्फोटमा साहको संलग्नता पुष्टि भएलगत्तै उनी काठमाडौं रहेको सूचना पाएर धनुषा प्रहरीले काठमाडौं प्रहरीलाई पक्रन पत्राचार गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले साह बस्ने सम्भावित ठाउँमा छापा मारे पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । 'बम विस्फोटलगत्तै सभासद साह र स्थानीय अर्का गुन्डा जीवनाथ चौधरीमध्ये एकले विस्फोट गराएको हल्ला थियो,' अनुसन्धानका लागि जनकपुर पुगेका प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृतले भने, 'अहिले आएर साहको संलग्नता पुष्टि भयो ।' २०६९ वैशाख १८ गते भएको विस्फोटमा ५ जनाको ज्यान गएको थियो भने ३२ घाइते भएका थिए । त्यसताका मिथिला राज्य समितिले अलग राज्यको माग राख्दै गरेको धर्नामा कुर्सीमुनि बम राखेर विस्फोट गराइएको थियो । विस्फोटमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरे…
१४ प्रहरी अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक
काठमाडौं, फाल्गुन १८ - अमेरिकाले करिब १४ जना नेपाली प्रहरी अधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपमा आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रहरी मुख्यालयले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावाससँग तत्काल छलफल गरी बाटो खोलिदिनसमेत आग्रह गरेको छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार पछिल्लो अवधिमा प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका १४ अधिकारीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अमेरिकी सरकारको नीतिले प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध आएको समेत जनाएको छ । अमेरिकाबाट तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र यूएन मिसनमा विज्ञापन आएपछि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले छनोट प्रक्रिया पार गरी उड्न दुई/तीन दिनमात्रै बाँकी हुँदा दूतावासले जानकारी दिने गरेको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक गणेश केसीले बताए । 'त्यसरी दिइएको जानकारीसमेत अपूरो हुने गरेको छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'अन्तिम समयमा त्यसरी अस्वीकार गर्दा अर्को मान्छेसमेत पठाउन सकिँदैन ।' धेरै प्रहरीहरू भेटिङ -कुनै विषयमा गरिने जाँच) मा पर्न थालेपछि म…
पूर्व सभासदका भाइ नक्कली जाली कारोबारमा तानिए
काठमाडौं/बारा, फाल्गुन १९ - एमाले उमेद्धवार महमुद आलमको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका पुर्व सभासद रामचन्द्र प्यासी कुसहवाका भाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । माघ ११ गते राजधानीमा ३५ लाख नक्कली भारतिय नोट सहित समातिएका ब्यक्तिहरुले प्यासीका भाई सुमेश्वर कुसहवालाई बयानमा पोलेपछि पक्राउ गरेको हो । उनी लामो समयदेखि नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा संलग्न रहेको हल्ला चलेपनि प्रहरीले प्रमाणीत गर्न सकेको थिएन । माघ ११ गते पाकिस्तानबाट ३५ लाख नक्कली भारतिय रुपैंया लिएर आएका पाकिस्तानी नागरिक महसुद आलमले बयानका क्रममा कुसहवाको नाम लिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारालाई अर्का एक बारा बञ्जरीकै परमेश्वर महतोलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो । बारा प्रहरी प्रमुख एसपी ईश्वरबाबु कार्कीले ४० बषिर्य कुसहवाले पक्राउको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीलाई पठाइएको बताए ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा ज्यान लिने/दिने बढ्दै
काठमाडौ, माघ १८ - दुई साताअघि काठमाडौं कपनमा सिन्धुपाल्चोकका गोविन्द अधिकारीले डेरामै छुरा हानी पत्नी रेणुकाको हत्या गरे र आफूले पनि विष सेवन गरी आत्महत्या गरे । ३० पुसको त्यस घटनाको कारण थियो, पत्नीमाथि शंका । मर्नुअघि गोविन्दले आफ्नो मोबाइलमा पत्नीको परपुरुषसँग सम्बन्ध भएको आरोप लगाउँदै आवाज रेकर्डसमेत गरेका थिए । 'प्रेमविवाह गरेको ६ महिनासम्म उसले मसँग राम्रो व्यवहार कहिल्यै गरिन, मीठो पकाएर खुवाइन,' प्रहरीले घटनास्थलमा पाएको मोबाइलमा रेकर्ड भएको उनको सन्देशमा उल्लेख छ, 'मेरो आँखा छलेर अर्कैसँग धेरै हिंडी, उसको यस व्यवहारले मलाई अपराधी बनायो ।' दुवैको मृत्युसँगै रेणुकाले धोका दिए/नदिएको वास्तविकता ओझेलमा पर्‍यो । घर बनाउने मिस्त्री पराजुलीले पत्नीको हत्यापछि प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा मर्नु उचित ठान्दै आत्महत्या गरेको मोबाइल रेकर्डमा बताएका छन् । उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा अविश्वासका कारण ज्यान जानेको संख्या बढ्दो छ । २ वर्ष यता राजधानीमा नेपाल प्रहरीका २ डीएसपीले नै आत्महत्या गरे । दुवैको आत्महत्याको कारण थियो, वि…
कारागारमा चौकीदार मोह तोडिदैं
काठमाडौं, फाल्गुन २१ - १३ महिनाअघिसम्म कारागारमा नाइके र चौकीदार बन्न कैदीबन्दीबीच तँछाडमछाड हुन्थ्यो । कारागारभित्र प्रभाव र डर देखाएर मात्र नभई बाहिर पनि जेल प्रशासन र नेतालाई 'आर्थिक' लगायत प्रभावमा पारेर चौकीदार बन्ने लहर चल्थ्यो । कैद सजायमा माफी, कैदीलाई चाहिने बन्दोबस्तीदेखि खानपानका सबै सामान खरिद गर्ने जिम्मा उसैको हुन्थ्यो । केन्द्रीय कारागारमा त उक्त पद हात पार्नेले मासिक २ लाखभन्दा बढी कमाउँथे । गृह मन्त्रालयले ०६९ माघदेखि कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका लागू गरेपछि चौकीदार बन्ने मोह ह्वात्तै घटेको छ । निर्देशिकाले चौकीदार, नाइके र भाइ नाइकेले पाउने सजाय मिनाहा रद्द गरेको छ । जसका कारण कैदीमा चौकीदारी मोह कम हुँदै गएको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले बताए । 'निर्देशिका आउनुअघिको तँछाडमछाड हटेको छ,' उनले भने, 'चौकीदार र नाइकेको दायरा साँघुरो बनाइदिएपछि चासो कम भएको देखिन्छ ।'
कानुनी आडमा हतियारको त्रास
काठमाडौं, फाल्गुन २९ - अपहरण र शरीर बन्धक बनाएर ऋणीसँग चर्को ब्याज असुलेको अभियोगमा पक्राउ परेका महेशबहादुर सिंहको घरबाट प्रहरीले सात थान हतियार बरामद गर्‍यो । गत बिहीबार समातिएपछि ललितपुरको भनिमण्डलस्थित घरमा छापा मार्दा फेला परेका ती सबै हतियार कानुनबमोजिम लिइएका थिए । हातहतियार तथा खरखजाना नियमावली २०२८ ले एक व्यक्तिलाई तीनवटा र परिवारले ६ वटासम्म हतियारको इजाजत लिन पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तो 'उदार कानुन'का कारण सिंहमाथि हातहतियार मुद्दा चलाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ । माघ २० गते तीन नाल हतियार बरामद भएपछि पक्राउ परेका शंकरदेव क्याम्पसका स्ववियु सभापति शुभराम बस्नेत, नेविसंघका पूर्वसहमहामन्त्री सचित शर्मा, राजेशविक्रम शाही, लीलाबहादुर खड्का र जोन खड्का एउटा हतियार नवीकरण नभएको आधारमा थुनामै छन् ।
चोरको मुख्य रोजाइ सुन, ल्यापटप र फोन
काठमाडौ, पुस २३ - राजधानीमा ३ वर्षअघि र यतिखेर चोरीको संख्या उस्तै छ । प्रहरीका अनुसार चोरीका घटना बढिरहेका छन् । तर चोरीको प्रकृति भने फरक छ । चोर्ने तरिका र चोरिने सामान फरक छन् । पहिले चोरी वा डकैती गर्न दिनभरि घरको रेकी गर्थे । घरमा को-को छन् ? सामान के-के छन् ? कुकुर छ, छैन लगायतका कुरा पत्ता लगाउँथे । अनि रातको समयमा हतियारसहित गएर डकैती गर्थे । नगद, सुनबाहेकका फ्रिज, सिलिन्डर ग्याँस भेटे जति सबै सामान उठाउँथे । तर, अहिले चोरहरू त्यसो गर्दैनन् । चोरहरू चोर्न दिउँसो घरमा कोही नभएका बेला सुटुक्क पस्छन् । अनि ४ वटा चीज मात्र चोरी गर्छ्न । 'नगद, सुन, ल्यापटप र मोबाइल ।' पछिल्लो समय प्रहरी तथ्यांकले यही देखाउँछ । ३ महिनामा राजधानीमा १९ वटा चोरी भए । दिउँसोको समयमा भएका सबै चोरीमा चोरले नगद, सुन, मोबाइल र ल्यापटप मात्र लगेका छन् । साताअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले गेस्टहाउसमा बसेर चोरी गर्ने ४ गिरोहलाई पक्राउ गर्‍यो । बागबजारको जयदुर्गा गेस्टहाउसमा बसेर गौशाला, पिंगलास्थान, सिफल, ज्ञानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा घरधनी नभएका बेला उनीहरूले सुन, नगद, मोबाइल र ल्यापटपमात्र चोरे …
हत्यामा संलग्न दुईको पहिल्यै निधन’
काठमाडौ, फाल्गुन २३ - गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न तीनमध्ये दुई जनाको निधन भइसकेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएपछि प्रहरीले २०६१ जेठमा भएको उक्त हत्यामा संलग्नबारे यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न निसान भनिने ऋषिराम लामिछानेको २०६२ सालमै मृत्यु भएको हो । चितवनको पिठुवा-९ का उनको नेपाली सेनाले भरतपुरमा गरेको कारबाहीमा मृत्यु भएको स्रोतले जनायो । उनको साथबाट पेस्तोलसमेत बरामद भएको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । 'बरामद हतियार अधिकारीको हत्यामा प्रयोग भएको हो/होइन अनुसन्धान भइरहेको छ,' प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'त्यो हतियार सेनाले लगेको हुनाले उसलाई पत्राचार गरेर हतियारबारे जानकारी लिइरहेका छौं ।'
काठमाडौं, फाल्गुन २२ - प्रहरीले बेलायतमा लुकेर बसेका अधिकारी हत्याका एक आरोपीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत सूचना जारी गरेको छ । दशकअघि चितवन, रत्ननगर नगरपालिकामा भएको कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका आरोपी रुद्र आचार्य बेलायतमा लुकिरहेको प्रहरीको दाबी छ । अनुसन्धानमा संलग्न चितवन प्रहरीले आचार्यको संलग्नता पुष्टि हुने आधार फेला पारेपछि पक्राउका लागि इन्टरपोलमार्फत 'डिफ्युजन नोटिस' जारी गरिएको हो । उक्त नोटिस अर्को मुलुकमा लुकेर बसेका अपराधीलाई पक्राउ गरी फिर्ता पठाउन इन्टरपोलमार्फत गरिने अनुरोध हो । यसका आधारमा इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूबीच अपराधी लिनेदिने काम हुन्छ । प्रहरी मुख्यालयले बुधबार नोटिस जारी गरेको हो ।
फैजानका हत्याराबाटै बाराका उद्योगीको हत्या
काठमाडौं, पुस २५ - दुई वर्षअघि राजधानीमा गोली हानी हत्या गरिएका इस्लामिक संघका महासचिब फैजान अहमदको हत्यामा संलग्नबाटै बाराका पेट्रोल ब्यावसायीमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ । आठ दिनअघि बाराको जीतपुर ३ का अफताब आलम अन्सारीमाथि गोली प्रहार गर्न आएका मध्ये एकले २०६८ असोज ९ गते महासचिव अहमदलाई काठमाडौंको घण्टाघरअघि गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले पुष्टि गरेको हो । मुख्यालय स्रोतले बारा घटनामा पक्राउ दुईमध्ये एक रवी पाण्डेयले नै फैजानलाई गोली हानेको जनाएको छ । फैजानलाई गोली हानेको ७ महिनापछि पक्राउ परेका राजधानीका एक ट्याक्सी चालकले पाण्डेयको सनाखत गरिदिएका हुन् । बारा घटनाका दुई अभियुक्त पक्राउ गर्नासाथ आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले सबै पक्षमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । टयाक्सी चालकलाई पुन पक्राउ गरेर सोधपुछ गर्दा उनले पाण्डेयले नै राजधानीमा फैजान माथी गोली हानेको बताएका हुन् । त्यसबेला केन्दि्रय अनुसन्धान ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने ट्याक्सी चालक रामेछापका २७ वर्षीय धनबहादुर थापा मगरलाई सार्वजानिक गरेको…
फेरि नक्कली भारुमै समातिए अन्सारी
काठमाडौ, माघ ११ - भारतीय नक्कली नोट र लागूऔषध मुद्दामा चार वर्ष कैद सजाय काटेर निस्किएका युनुश अन्सारी पुनः भारतीय जाली नोटसहित पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय कारागारबाट गत असोज १८ मा छुटेका अन्सारीलाई नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले ३४ लाख रुपैयाँ नक्कली भारु कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै शनिबार बिहान ललितपुरको ताल्छिखेलस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको हो । अन्सारीसहित अन्य तीनजना पनि समातिएका छन् । पक्राउ पर्नेमा पाकिस्तानी नागरिक महसुद आलम, नेपाली नागरिक सुरेश आलेमगर र सोहेल खान छन् । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसीका अनुसार तीन दिनअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा ३४ लाख रुपैयाँ जाली भारुसहित समातिएका एक पाकिस्तानी र दुई नेपालीको सूचनाका आधारमा अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको हो । पाकिस्तानी एयरवेज -पीआईए) बाट आएका पाकिस्तानी नागरिक महसुद आलम बिहीबार बेलुका पक्राउ गरिएको थियो ।
उनले शरीरमा बाँधेर नक्कली भारु ल्याएका थिए । विमानस्थलबाट ठमेलको पोताला होटल पुगेका आलमले आले र खानलाई बोलाएको प्रहरीले जनाएको छ । पिछा गर्दै गएको विशेष ब्युरोको टोलीले पाकिस्तानीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेपछि सोधपुछ गर्दा अन्…
डीभी भर्नेको विवरण खोज्दै प्रहरी
काठमाडौ, माघ २० - महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा कार्यरत असई विकास अधिकारीलाई मुख्यालयले कमान्डो तालिममा भारत पठाउने निर्णय गर्‍यो । तर उनले यति महत्त्वपूर्ण अवसर अस्वीकार गर्दै उनले लिखित निवेदन दिँदै कारण खुलाए, 'मलाई डीभी परेको छ । दुई चरणको प्रक्रिया पूरा गरिसकें । तेस्रो चरणमा आफैं उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले तालिममा जाँदा यता छुट्छ ।'
'सस्तो सामान’ किन्दा प्रहरी खोरमा
काठमाडौ, माघ ३ - सस्तैमा कुनै सामान भेटियो भनेर कागजात नहेरी खरिद गर्ने बानी छ भने त्यसलाई त्याग्नुहोला । नत्र, प्रहरी फन्दामा परिएला । बिना कागजपत्र सामान खरिद गर्नेलाई प्रहरीले पक्रेर चोरी मुद्दा चलाउन थालेको छ । चोरी गर्नेले व्यापारीलाई सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेको पाएपछि प्रहरीले खरिदकर्तालाई पनि पक्रेर मुद्दा चलाउन थालेको हो । राजधानीमा २ वर्षदेखि चोरी गर्दै आएको समूहको सामान खरिद गर्ने झापा गौरादहका ३२ वषर्ीय रमेश सुनारलाई प्रहरीले पक्रेको छ । बल्खुमा न्यु पशुपति ज्वेलर्स सञ्चालन गरेका उनले चोरिएका सामान सस्तोमा खरिद गरी फाइदा कमाउने गरेको पाइएपछि प्रहरीले पक्रेको हो । प्रहरीले चोरी गरी उनलाई सामान बेच्ने ३ जनालाई पनि पक्रेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट विदुरका सरोज नेपाली, नुवाकोट थानापानीका भुवन परियार र काठमाडौं रामकोटका लक्ष्मण गिरी छन् । उक्त समूहले अढाइ वर्षयता राजधानीका विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै आएको थियो । दिउँसो घरमा कोही नभएका बेला छिरेर कोठाको ताल्चा फोर्दै सुन, मोबाइल र क्यामरा जस्ता सामान लिएर जाने गरेको पाइएको छ । बालाजु वृत्तका अनुसार उक्त समूहले हालसम्म विभिन्न २२…
चुनौतीको पहाड बोकेर फर्किए आईजिपी
काठमाडौं– २२ बर्षपछि छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल भारत सिमामा हुने अपराधीक गतिविधी नियन्त्रणको चुनौती बोकेर फर्किएका छन् । ६ सदस्यि प्रहरी टोलीको नेतृत्व गरेर ५ दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका आईजिपी अर्यालले भेट गरिएका सबै सुरक्षा अधिकारीले नेपाली भुमीको प्रयोग गरेर भारत बिरुद्ध हुने अपराधिक गतिविधीका बिषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
भारतिय सञ्चार माध्यम टाईम्स अफ ईण्डियाले जनाए अनुसार सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक अरुण चौधरीले भारतिय नक्कली जाली नोटको बिषयमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले नेपालबाट भारतमा जाने जाली नोट मध्ये २० प्रतिशत नेपाल भारत सिमामा रहेका मजदुरमा खपत हुने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘जाली भारु सिमा क्षेत्रको अर्थब्यवस्थाको एक भाग रहेको देखिन्छ, जाली नोटका कारोबारीले भारत नेपाल सिमामा काम गर्ने मजदुरलाई ‘कन्ट्रयाक्टर’ मार्फत जाली नोट दिने गरेको पाइएको छ’ चौधरीलाई उद्धत गर्दै टाईम्स अफ ईण्डियाले भनेको छ ‘मजदुरी गर्नेहरु त्यतिकै फसिरहेका छन् ।’
नेपाली सुरक्षाअधिकारीले भारतिय पक्ष…
१७ महिनामा १ सय ५ किलो सुन बरामद
काठमाडौ, माघ २ - तातोपानी नाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बितेको १७ महिनामा सुरक्षाकर्मीले १ सय ५ किलो सुन बरामद गरेको छ । पछिल्लो समय बुधबार मात्रै प्रहरीले तातोपानी नाकामा चिनियाँ नागरिकबाट ८ किलो र विमानस्थलमा भारतीय नागरिकबाट ६ किलो सुन बरामद भएको हो । यी एकैदिनका दुई घटनासँगै पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा १ सय ५ किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरीले बरामद गर्न नसकेको योभन्दा धेरै सुन विभिन्न बाटो हुँदै बाहिरिने गरेको अधिकारीहरू स्वयं
स्विकार्छन् । यसले मुलुक विस्तारै सुनको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै गरेको देखिन्छ । भारतीय बजारमा सुनको चर्को माग भए पनि त्यहाँको अभावको फाइदा उठाउँदै नेपाली भूमिलाई तस्करले 'ट्रान्जिट' बनाउँदै आएका हुन् ।
प्रहरीका प्रवक्ता गणेश केसी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुकमा सुन तस्करी भइरहेको स्वीकार गर्दै रोक्न सुरक्षाकर्मी लागिरहेको बताउँछन् । उनले पछिल्ला केही दिनमा पक्राउ र बरामद भएको सुनले समेत प्रहरीको सक्रियता प्रस्ट्याएको बताए । 'नेपाल प्रहरी कुनै छिमेकी मुलुकलाई असहज हुने किमिसका तस्करी लगायत अन्य ग…
एआईजी बढुवा नहुँदा 'काम प्रभावित'
काठमाडौ, माघ २२ - सरकारले एआईजीको बढुवा नगर्दा काम/कारबाही प्रभावित भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले गृहको प्रशासन विभागलाई पत्र लेख्दै बढुवाको गाँठो फुकाइदिन अनुरोध गरेका छन् । यही कारण अर्को महिनादेखि एआईजी प्रमुख रहने विभागका प्रहरी कर्मचारीले तलब र रासनसमेत नपाउने भएका छन् । तिनमा महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रशासन, अपराध अनुसन्धान, कार्य, मानवस्रोत विभाग तथा महानिरीक्षकको कार्यालय पर्नेछन् । प्रमुखको स्वीकृतिमा मात्र आर्थिक कारोबार हुने भएकाले विभागीय प्रमुख नहुँदा ३५ सयभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी अर्को महिनादेखि तलब र रासनबाट वञ्चित हुने भएका हुन् । प्रहरीभित्रका खरिद र टेन्डरजस्ता प्रक्रियासमेत यसबाट प्रभावित हुने भएका छन् । तीन महिनादेखि दरबन्दी खाली स्थानमा डीआईजी निमित्त विभागीय प्रमुख भएर कार्यभार सञ्चालन गरेको सोमबार एक महिना पुगेको छ । प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार निमित्त दिइएका व्यक्तिले एक महिनामात्र कार्य सञ्चालन …
मिसन जाँदै हराउँदै
काठमाडौं, माघ २४ - संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा गएका कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका ३६ प्रहरी कर्मचारी विदेश पलायन भएका छन् । तीमध्ये केही मिसनबाट नफर्की उतैबाट युरोप र अमेरिकातर्फ गएका छन् भने कतिपयचाहिँ स्वदेश फर्केपछि संगठनलाई सम्पर्क नै नगरी पुनः बिदेसिएका छन् । पलायन हुनेहरूले राष्ट्रसंघीय मिसन गएबापत प्रहरी संगठनलाई तिर्नुपर्ने रकमसमेत बुझाएका छैनन् । मिसन गएबापत पाइने विदेशी मुद्राको १० देखि १४ प्रतिशतसम्म रकम प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । त्यसरी कोषलाई बुझाउन बाँकी रकम १ लाख ६२ हजार २ सय ९ अमेरिकी डलर (झन्डै १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) छ ।
पक्राउ पर्दै छुट्दै गुण्डा नाईके
काठमाडौ, फाल्गुन २ - महाराजगन्ज क्षेत्रमा गुन्डागर्दीको एकछत्र पकड बनाएका तेजेन्द्र गुरुङलाई प्रहरीले २ साताअघि पक्राउ गर्‍यो । उनीमाथि हाउजिङ कम्पनी, ठेकेदार र व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको आरोप छ । महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तको हिरासतमा रहेका उनलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइएको छ । वृत्तका डीएसपी प्रभु ढकालका अनुसार त्यस क्षेत्रमा ७ देखि १० जना गुरुङका लागि काम गर्छन् । सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार ७ दिन थुनामा बसिसकेका उनी १८ दिनपछि छुट्ने छन् र सम्भवतः पुनः गुन्डागर्दीमै लाग्नेछन् । यसअघि पनि उनी ८ पटक पक्राउ परेर सार्वजनिक अपराधमा हिरासत बसेर छुटेका थिए । ३३ वषर्ीय तेजेन्द्र पक्राउ पर्दै छुट्ने एक उदाहरण हुन् । राजधानीलाई अपराधको केन्द्रबिन्दु बनाएका गुरुङ जस्ता एक दर्जनभन्दा बढी गुन्डा पक्राउ पर्दै छुट्दै पुनः सोही काममा फर्किएका छन् ।
अंकहरुअभिलेखालयहाम्रो बारेमाविज्ञापनसल्लाह सुझाबसम्पर्क अंक: ५८८ | २०७० चैत्र ९ | Mar 23, 2014 गृहपृष्ठ » लेखहरु » साहित्य अघोषित सम्बन्ध
स री है," हतारमा एक युवतीसँग ठक्कर खाएपछि झसंग हँुदै मैले भनँे।
ऊ पाँच वर्षअघिको क्याम्पसे जीवनकी मेरी सहयात्री सरनिा थिई।
चार वर्षअघि हामी छुट्टएिका थियौँ।
विश्वविद्यालयको खाली चौरमा रूखको फेदमुनि बसेर कोर्सभित्र र बाहिरका ठूल्ठूला पुस्तक पढ्थ्यौँ। घर, परविार, आफन्त र विद्यार्थी जीवनको काठमाडौँ बसाइका बारेमा कुरा गथ्र्यौं। क्याम्पसे जीवनमा केटाहरूले हातले कोरेर दिएका प्रेमपत्र एकअर्कालाई सुनाएर ठट्टामा उडाइदिन्थ्यौँ।
तर, आज ऊ ठट्टा गर्ने मुडमा थिइनँ। गम्भीर देखिन्…
न्युरो सर्जन देबकोटाकी छोरी अपहरण गर्ने समुहका नाईके पक्राउ
आधा दर्जन डकैतीका योजनाकार,
काठमाडौं– बरिष्ठ न्युरो सर्जन डाक्टर उपेन्द्र देबकोटाकी छोरीलाई अपहरण गरी फिरौती लिने गिरोहका नाईकेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले रामेछापका राजेश क्षेत्री भनिने गोकुल गिरीलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । लामो समय भारतमा लुकेर बस्दै आएका गिरी पछिल्लो समय राजधानीमा नै नाम र पहिचान बदलेर अपराधिक गतिवीधीमा संलग्न भएको सुचना पाएपछि काठमाडौं प्रहरीको बिशेष ब्युरोका ईन्सपेक्टर कुमोद ढुङगेलको टोलीले थापाथली स्थित एक एरोबिक सेन्टरबाट फर्कदै गरेका बेला गिरीलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी गिरीको साथबाट १४ ग्राम लागुऔषध खैरो हेरोइन समेत बरामद गरेको छ । २०६५ साल साउनमा हेपाली हाईटस्थित घरमा आएर डाक्टर देबकोटाकी १५ बर्षिय छोरी मेघाको अपहरण गरी लगेका थिए । गिरी उक्त अपहरण गर्ने समुहका नाईके भएको प्रहरीले जनाएको छ । गिरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरुको छाता संगठन ईन्टरपोलले २०६५ भदौमा रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो ।
डाक्टर देबकोटाको घरमा पालिएको कुकुरलाई बिष ख…
महिलाको 'चरित्र हत्या'मा क्याप्टेन
काठमाडौ, चैत्र १२ - नेपाली सेनाका सहसेनानी (क्याप्टेन) ले ऋण तिर्नुपर्ने महिलाको उल्टै चरित्र हत्याको प्रयास गरेको खुलासा भएको छ । नेपालगञ्जको ४ नम्बर गणमा दरबन्दी र ब्याच नम्बर ५०७ ड का क्याप्टेन रेवन्त केसीले ईचंगुनारायणकी गीता कार्कीको चरित्र हत्या प्रयास गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । केसीले कार्कीलाई धम्क्याएको भन्दै उनीमाथि कारबाही गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथि जगदिशचन्द्र पोख्रेलले केसीका बिरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । 'पीडित महिलाले थप प्रमाण ल्याउँछु भनेपछि सबै प्रमाणलाई एकमुष्ट राखेर अनुसन्धान गर्ने तयारी भइरहेको छ,' उनले भने 'आरोपित केसीलाई काठमाडौं झिकाएर वा सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेर कारबाही गरिने छ ।' ३ वर्षअघि जग्गा प्लटिङ गर्ने भन्दै क्याप्टेन केसी र पत्नी विष्णु ठकुरीले कार्कीलगायत आधा दर्जन महिलाबाट झण्डै ५ करोड रुपैंया लिएका थिए । २०६८ चैतमा लगेको रकम लामो समय बित्दा समेत नदिएपछि पीडित महिलाहरुले प्रहरी र नेपाली सेनामा उजुरी …
न्युरो सर्जन देबकोटाकी छोरी अपहरण गर्ने समुहका नाई...